बागलुङ भगवती ट्रेडर्सद्वारा टिभिएस कम्पनीको शोरुम शुभारम्भ ! – ebaglung.com
बागलुङ भगवती ट्रेडर्सद्वारा टिभिएस कम्पनीको शोरुम शुभारम्भ !
२०७४ आश्विन १, आईतवार १७:४९	Top News, थप समाचार
प्रदिप पन्त, बागलुङ २०७४ असोज १ । बागलुङ भगवती ट्रेडर्सले टिभिएस कम्पनीको शोरुम शुभारम्भ गरेको छ । ग्राहकहरुको चाहना र माग अनुसार ट्रेडर्सले बाईक तथा स्कुटरको शोरुम आईतबार एक कार्यक्रमका बिच बागलुङमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपालीहरुको महान चार्ड विजया दशमी एवं दीपावलीको अवसरमा बिशेष छुट सहित बागलुङमा मोटर बाईक तथा स्कुटको बिक्रिको लागि व्यवस्थापन मिलाईएको बागलुङ भगवती ट्रेडर्सका संचालक मनोज खडकाले जानकारी दिए । ग्राहकहरुको बढदो मागलाई मध्य नगर गर्दै बाईक र स्कुटरको शोरुम संचालन गरिएको खडकाको भनाई थियो ।
खडकाका अनुसार नय शोरुमको शुभारम्भ सगै ग्राहकहरुका लागि आकर्षक छुटको व्यवस्था मिलाइएको छ । दशै र तिहारको अवसरमा नय“ा बाईकमा सात हजार र स्कुटरमा नौ हजार रुपैय“ा छुटको व्यवस्था मिलाईएको छ । बाईक तथा स्कुटरको खरिदमा विभिन्न छुट तथा उपहार योजना समेत राखिएको छ ।
बाईक एवं स्कुटर खरिद गर्ने प्रत्येक एक व्यक्तिलाई लक्की ड्रा मार्फत एक दिनमा एक तोला सम्मको सुन प्रदान गरिने छ,खडकाले भने, यो बम्पर उपहार योजना एक सय दिन सम्म संचालन हुने छ ।
टिभिएस कम्पनीका मोटरसाईकको बजार मुल्य एक लाख ७० हजार देखि तिन लाख रुपैय“ा र स्कुटरको दुई लाख सम्म रहेको छ । बागलुङ भगवती ट्रेडर्सले पछिल्लो समयमा न्यु होल्यान्ड टयाक्टर,केस टयाक्टर,न्यु होल्यान्ड (स्काभेटर,डोजर)टिभिएस बाईक,पार्टपुर्जा,सवारी पाङग्रा लगाए आठ ओटा सेवाहरु एकै स्थानबाट प्रदान गर्दै आएको छ ।
हाइटेन्सन लाइन चुँडिएर करेन्ट लाग्दा १३ जना घाइते, २ को अवस्था गम्भीर !